Everton Oo Guul Naadir Ah Ku Gaartay Anfield Iyo Dhibaatada Liverpool Oo Wejiyo Badatay – Garsoore Sports
Everton Oo Guul…
Kooxda Liverpool ayaa sii wadda rikoorkooda Guuldarrooyinka iyadoo kooxda ay xafiiltamaan ee Everton ay heshay guul naadir ah kaddib markii ay natiijo 2-0 ah kala soo laabatay garoonka cabsida leh ee Anfield.
Goolal ka kala yimid Richarlison iyo Gylfi Sigurdsson ayaa uga filnaatay Everton inay gaarto guushoodii ugu horreeysay tan iyo 1999kii, kulamada labadan koox ee loo yaqaano ‘Merseyside Derby’.
Natiijada ayaa la micno ah in Liverpool ay la kulantay guuldarradoodii afaraad oo isku xigta horyaalka iyo mida seddexaad oo isku xigta oo garoonkooda ah.
Maalintii xumeyd ee Liverpool ayaa sii xumaatay markii ay dhaawac ku waayeen kabtankooda Jordan Henderson qeybtii hore.
Everton ayaa la dhibco ah Liverpool iyada oo labada kooxoodba ay seddex dhibcood ka hooseeyaan affarta boos ee ugu sarreeya laakiin Everton kulan ayaa u harsan.
Sideey wax u dhaceen?
Goaaal!!!. Everton ayaa hoggaanka cayaarta la warreegtay seddex daqiiqo kaddib markii James Rodriguez uu kubbad u dhex bixiyay Richarlison kaasoo dhinac ka dhigay goolhaye Allison kubbad quruxbadan oo cadaadis uu saarnaa weeraryahankan.
Liverpool ayaa xoogaa kaddib si fiican uga jawaabtay goolka iyadoo ku qasabtay goolhaye Jordan Pickford inuu sammeeyo laba badbaadin oo wanaagsan oo ka kala yimid Henderson iyo Trent Alexander-Arnold.
Kabtanka Liverpool ayaa markaas dhaawac ku baxay wax yar uun kahor nus saac markii uu dhaawacmay waxaana lagu bedelay da’yar Nathaniel Phillips.
Daqiiqado kaddib badalkiisii, Everton ayaa heshay fursad weyn oo ay hoggaanka ku laba jibaari kartay laakiin Seamus Coleman ayaa kubbad madax aheyd oo uu helay waxaa ka badbaadiyay goolhaye Alisson Becker.
Kooxda martida loo ahaa ayaa nolol fiicneyd qeybtii labaad ee cayaarta iyadoo weeraryahan Sadio Mane uu laba karoos dul-mariyey birta, kaddibna iskuday uu goolka la beegsan lahaa waxaa ka saarray daafac Michael Keane.
Waxyar uun kahor daqiiqadii 70aad, weeraryahan Mohamed Salah ayaa laga diiday kubbad meel dhow ah iyadoo markale uu badbaadin sammeeyay goolhaye Pickford.
Goaaaal!!!.. Iyadoo siddeed daqiiqo ka hartay cayaarta, ayuu Dominic Calvert-Lewin waxaa uu dhulka dhigay Alexander-Arnold isagoo ku sugan diilinta ganaaxa, Sigurdsson ayaana rigoorada u rogay gool si uu u xaqiijiyo guushan taariikhiga ah ee kooxdiisa Everton.
Xaqiiqooyinkii Laga Diiwaangeliyay Kulankii Liverpool Iyo Everton – Waa Layaab!!!